Dastabej » बढैयाताल गाउँपालिका प्रमुख लालबहादुर श्रेष्ठः जसले ४८ किलो मिटर सडक पक्की गरे १० किमि पक्की हुँदै
बढैयाताल गाउँपालिका प्रमुख लालबहादुर श्रेष्ठः जसले ४८ किलो मिटर सडक पक्की गरे १० किमि पक्की हुँदै – Dastabej
बढैयाताल गाउँपालिका प्रमुख लालबहादुर श्रेष्ठः जसले ४८ किलो मिटर सडक पक्की गरे १० किमि पक्की हुँदै
पर्यटकीय क्षेत्र बढैयाताल जाने पक्की सडक ।
बर्दिया । पाँच वर्षमा सबैभन्दा धेरै सडक कालोपत्रे कुन पालिकाले गर्यो ? जवाफ पाउनु हुने छ, त्यो पालिका हो बढैयाताल गाउँपालिका । त्यसो भए कति किलो मिटर सडक पक्की भए त ? उत्तर हो, ४८ किलो मिटर । १० किलो मिटर सडक कालोपत्रे हुने क्रममै छ । यो आर्थिक वर्षमै ५८ किलो मिटर सडक पक्की हुने छ ।
प्राविधिकहरु पनि आश्चर्यमा पर्छन । बढैयातालत्यसको नेतृत्वकर्ता थिए, गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठ । उनी श्रेष्ठ फेरि पनि बढैयाताल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा फेरि पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । उनले अगामि ५ वर्ष कार्यकालमा बढैयाताल गाउँपालिकाका सबैजसो सडक कालोपत्रे गरिसकेका छन्। उनी प्रमुख हुनुअघि बढैयाताल गाउँपालिकामा हुलाकी सडकबाहेक एक किलो मिटर सडक पक्की थिएन ।
भोलागौडीदेखि बढैयाताल सीमसारसम्मको सडक कालोपत्रेको भइसक्यो । भोलागौडीदेखि शान्तिपुर सडक, मैनापोखरचोकदेखि रानीपुर जाने सडक, पचासाचोकदेखि भारत सीमा र त्यहाँदेखि उत्तर कपास विकास समिति जाने सडक पक्की भइसकेको। उक्त सडकले महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गलाई जोड्ने छ । बढैयाताल गाउँपालिकाका प्रमुख लालबहादुर श्रेष्ठले सडक निमार्णको काम यही आर्थिक वर्षभित्र हुने बताए । उनका अनुसार सडक निमार्णको काम निमार्ण कम्पनीलाई दिइसकेको र काम धमाधम भइरहेको छ । ‘पहिलो प्राथमिकता सडक हो । यसले जग्गाको मुल्य बढाउ“छ । आउजाउमा सहज पुग्छ,’ उनले भने,‘त्यसैले सडक निमार्णका लागि सबैभन्दा बढी बजेट बिनियोजन गरेका छौँ ।
१७ बैशाख २०७९, शनिबार १२:५४ प्रकाशित